Tor Browser 11 inosvika neyakagadziridzwa dhizaini uye yakavakirwa paFirefox 91 ESR | Linux Addicts
Mushure megore rinopfuura rebudiriro, uye kunyangwe ivo vatanga dzepakati kudzokorora Munguva yese iyi, tatova neshanduro itsva yeFirefox-based browser yakachengeteka. Tiri kutaura nezvazvo Tor Browser 11, uye pakati pekuchinja kwakanyanya kune imwe inomira pamusoro pevamwe, kupfuura chero chinhu nekuti ndicho chinhu chekutanga chatichaona patinochitanga: chinouya nemushandisi mutsva wekushandisa kupa manzwiro matsva, ndiko kuti, chii. muchiRungu vanoti Look and feel.
Mwedzi mishoma yapfuura, Mozilla yakaburitsa dhizaini nyowani yebrowser yayo Web. Kunyangwe kusinganaye kune zvinodiwa nemunhu wese, chokwadi kune vashandisi vanoti shanduko "inorwadza", inopa chiitiko chemazuva ano, chine maumbirwo uye mavara atinogona kuona akafanana mune mamwe mabhurawuza akadai seGoogle Chrome. Iyi dhizaini nyowani iripo muFirefox 91 ESR, vhezheni yebrowser iyo itsva Tor Browser 11 yakavakirwa.
Zvakanakisa zveTor Browser 11
Zvakare zvine chekuita nechitarisiko chitsva uye shanduko yepasi kuFirefox's ESR v91, iyo 11th vhezheni yeTor browser yaita. touch-ups mukati mese kuitira kuti pasave nedhizaini iri kunze kwekuita; ndiko kuti, ma tweaks akaitwa zvichibva pane zvakaunzwa neMozilla muFirefox 89, saka haufanirwe kunetseka nezve zvimwe zvinhu zvinoonekwa neimwe nzira uye zvimwe neimwe. Pakati pekuchinja uku tine mavara, typography, mabhatani uye zvidhori. Ese maficha matsva akaunzwa neMozilla kubvira vhezheni yayo yapfuura ESR iripo zvakare muTor Browser 11.
MuTor Browser 11 V2 masevhisi ehanyanisi akaraswa, zvachose. Icho chinhu chavainyevera pamusoro pacho kubva pakatangwa Tor 10.5, uye zuva iro ratosvika. Paunenge uchivandudza, Tor 0.4.6.8 v2 masevhisi haachasvikike uye vashandisi vachawana "Invalid Onion Site Address" kukanganisa.
Asi hadzisi shanduko dzese dzakanaka. Tor Browser 11 ndeye zero-point vhezheni (11.0), izvo zvinoreva kuti yakakura update isati yawana chero zvigadziriso. Naizvozvo, zvikanganiso zvakasiyana-siyana zvinozivikanwa/ bugs:
DocumentFreezer uye faira schema
Mafonti haana kunyorwa.
Zvimiro hazvipo pakatanga kubhowa ku esr91 pane macOS.
Chinja nzira yeHTTP yeBlockchair Search mupi.
AV1 mavhidhiyo anoratidza seakashata mafaira muWindows 8.1.
Sezvo iyo yekuvandudza kusvika 11.0a9 mamwe maaddon haashande uye anofanirwa kuremara-kugoneswazve pakutangisa kwese.
Kusandura svg.disable kunokanganisa marongero eNoScript.
Chrome browser inotyoka kana yakavanzika modhi yekubhurawuza yakadzimwa.
Tor Browser ikozvino inogona kutorwa kubva pakudhawunirodha peji rewebhu, rinowanikwa pa Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Tor Browser 11 inosvika neyakagadziridzwa dhizaini uye yakavakirwa paFirefox 91 ESR